डढेलो (नेपालमा व्याप्त पहाडी -मधेसी साम्प्रदयिकतामा आधारित् ) – MY PASSION
December 3, 2009 Shravan Kumar LuitelLeaveaComment on डढेलो (नेपालमा व्याप्त पहाडी -मधेसी साम्प्रदयिकतामा आधारित् )
डढेलो (नेपालमा व्याप्त पहाडी -मधेसी साम्प्रदयिकतामा आधारित् )
डा. सुरेन्द्र लाभ
टल्पलाइरहेका आँसुलाई उसले धेरैबेरदेखि आँखाको पलकका बीचमा रोकेको थियो। तर आँसु भित्र पस्न सकेन र दुवै गालामा र्झ्न थाल्यो। एकपटक बाँध फुटेपछि निकै बेरसम्म भल बगिरह्यो। बन्द कोठाको छ्यानमा एक्लै बसेर उसले टुलुटुलु हेरिरह्यो। आधा रात बितिसक्यो। आज बिहान उठ्नेबित्तिकै कसको मुख देखियो र यस्तो भयो? किन आज एकैदिनमा संसार फेरियो? किन चिनेकाहरू नचिनिने भए? कसरी आफ्नै देशको राजधानी उन्मत्त भयो? किन यस नगरमा ३५ वर्षसम्म गरेको तपस्या भत्कियो? नगरको माटो र पानीमा आफूलाई मिलाउन गरेको त्यत्रो प्रयास एकै निमेषमा लुप्त भयो? सोच्ता-सोच्तै ऊ छट्पटाइरह्यो।
बिहान ऊ उठ्दा एकदम ठीक-ठाक थियो। शहरमा कहाँ के हुँदैछ उसले केही बुझ्ेको थिएन, सधैं किताबकै संसारमा हराइरहन्थ्यो। कलम घोट्ता-घोट्तै सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको उसले २५ वटा पुस्तक लेिखसकेको थियो। कथा, कविता, लेख छापिइरहन्थे। ऊ एक उच्च विद्वान्का रूपमा प्रख्यात छ।
कुनै नयाँ पुस्तकको खबर पाएर किन्न बिहानै हिँडेको थियो। चुपचाप आफैँमा मग्न भएर अगाडि बढ्दैथियो। पछाडिबाट आएको नारा जुलुसको स्वर कानमा पर्‍योः
हृतीक रोशन – मुर्दावाद!
काले धोती – देश छोड!
यस ठाउँमा सधैं यस्तै भइरहन्छ, भन्ने सोच्तै ऊ खुरुखुरु अगाडि बढ्यो। थाहा छैन, को हो यो हृतीक रोशन? मान्छेहरू किन मुर्दावादको नारा घन्काउँदै छन्? केही बुझन सकेन, तर काले धोतीबाट केही सङ्केत पायो। यस ठाउँमा त यी शब्द मधेशी समुदाय र नागरिकको पर्याय बनेका छन्। जुलुस नजिकै आइपुग्यो र जुलुसबाट कसैले चिच्यायो― “पक्री! पक्री!! यही हो काले धोती!” यो सुनेर ऊ अलिक आत्तियो र आफ्नो शरीरतिर नजर दौडायो। उसले धोती लगाएको छैन र ऊ कालो पनि छैन। अलिक आश्वस्त भयो― होइन अरूलाई भनिएको होला। ऊ फेरि अगाडि बढ्यो।
यत्तिकैमा भीडले उसलाई घेराबन्दी गर्‍यो। चारैतिर उत्तेजित भीड देखेर जाडोमा पनि उसको निधारमा पसिना आयो। भीड चिच्याउँदैछ― “नछोड! नछोड!! साले इण्डियनलाई नछोड।” उसको गला अवरुद्ध भयो। आँखा अगाडि अन्धकार छायो। बल्लबल्ल उसको बोली आयो― “म इण्डियन होइन, नेपाली हुँ। म काठमाडौं निवासी हुँ। बानेश्वरमा मेरो घर छ…”, उसको आर्तनाद कसैले सुन्यो या सुनेन, भीडबाट निस्किएका अनेक अप-शब्द ऊ सुन्दैथियो। ऊ विस्तारै बेहोस हुन थाल्यो। बेहोस भइराखेका बेलामा भीडका पछाडि उभिएको एउटा युवकमा उसका नजर पुगे। अरू कोही नभई उसकै छोरो थियो। ऊ अचेत भयो।
होश खुल्नेबित्तिकै उसले चारैतिर पुुलिस देख्यो। तिनीहरू उसलाई हात समातेर उठाउँदैथिए। पूरा जीउ दुखिरहेको थियो, प्यारो छोराको सम्झ्ना भयो। ऊ भीडमा के गर्दैछ? ऊ जुलुसमा नारा लगाउँदैछ। अघि बढ्दैछ। घृणा फैलाउँदैछ। बेहोसीमा पनि यी सबै कुरा मनमा आउँदा ऊ दुःखी भयो। मेरो छोरो उत्तेजनाको कुन चुलीमा थियो। जसले काले धोती मा आफ्नो बाबुलाई चिन्न सकेन, उसको संस्कार र शिक्षा? “जातपात केही हुँदैन बाबु! सारा संसारका मान्छे एकै हुन्। हामी सबैको जात मानव र धर्म मानवता हो”, साँझ्-बिहान यही रटाउँदा-रटाउँदै छोरो यत्रो भयो। तर यो शिक्षाको एउटा पनि शब्दको प्रभाव किन परेन? शहरमा सभ्य व्यक्तिका रूपमा सम्मानित मान्छेको छोरो किन यसरी संस्कारहीन भयो? बाबु मधेशी र छोरो पहाडी कसरी भयो? केही बुझन सकिएन!
खुट्टा खोच्याउँदै ऊ घरतिर हिँड्यो। बाटामा उसलाई स्मरण भयो― सानै छँदा स्कूलबाट फर्किने बित्तिकै छोराले सोधेको थियो, डेडी! मधेशीहरू चोर हुन् कि होइनन्, हाम्रो स्कूलमा सबै त्यसै भन्छन्। ऊ त्यतिखेर अकमक्क परेको थियो, कुनै जवाफ फुरेन! तुरुन्तै गालामा एक चड्कन किन दिइनँ भन्ने आज अनुभव हुँदैछउसलाई। घर पुगेपछि श्रीमतीले बेलिविस्तार सुनिन् र अवस्था समेत देखिन्। सहानुभूतिको सट्टा उनी, रिसले मुर्मुरिइन्। दुई जनाबीच घमासान भनाभन भयो।
“किन घरबाट निस्कनुभो? तपाईंले शहरको स्थिति बुझनुभएको छैन?”
“मैले कहाँ केही बुझ्ेको छु र?”
“दिनभरि पुस्तकमा टाउको जोतेपछि कसरी देशविदेशको खबर बुझ्िन्छ त!”
“तर यो सम्पूर्ण घटनामा मेरो के दोष?”
“मधेशी हुनु तपाईंको दोष हो, राम्रो लुगा लगाउनु नत्र मान्छेले चिन्छन् भनेर कति पटक भनेँ!”
“चिन्छन् भन्नुको कारण के हो? के म तिम्रो छोरो जस्तै बोरावाला जिन्स पैन्ट, रातो, पहेँलो भेस्ट, कानमा कुण्डल, घोडाको जस्तो केश र हात्तीका खुट्टा जस्ता ठूला जुत्ता लगाएर आबारा बनँू? अनि किन अहिलेसम्म फर्किएन त तिम्रो लाठसाहेब! मलाई त जे भो-भो, तर उसको चिन्ता छ।”
“तपाईं छोडिदिनुहोस् उसको चिन्ता गर्न।” भीडले तपाईंलाई घेरेका बेलामा ऊ कसरी चिच्यास् साथी हो! उहाँ मेरो बुबा हुनुहुन्छ भनेर। त्यतिखेर भीड उसमाथि खनिँदैनथ्यो। भीडले ऊपनि मधेशी हो भनेर चिनिहाल्थ्यो नि!”
“मधेशीलाई मधेशी भनेर चिने के आपत्ति?”
“तपाईं जस्तै चुटाइ खान्थ्यो अरू के! अनि अर्को कुरा, ऊ तपाईंको मात्र छोरो हुन्थ्यो भने मधेशी हुन्थ्यो, तर मेरो समेत छोरो भएकाले पहाडी पनि हो।”
अन्तिम संवाद भालाझ्ैँ कलेजोमा गाडियो, अचानक कसैले तल खसाइदिए जस्तै भयो। अतीतका धेरै कुरा मस्तिष्कमा घुम्न थाले। छरिएका कागजका पन्ना समेटेझ्ैं आफैँलाई सम्हालेर जवाफ दियो― “हेर! म मधेशी हुँ यो साँचो हो। तिमी पहाडी हौ यो पनि साँचै हो। जतिखेर मसँग बिहे गर्‍यौ त्यतिखेर यस सत्यलाई बुझ्ेकी थियौ कि थिइनौ?”
“त्यसो भए थाहा होला हामीले सिनेमाको प्रभाव र अन्य आकर्षणका कारणले बिहे गरेका होइनौँ। हामीले एउटा आदर्श र एउटा सिद्धान्तका अधीनमा रहने प्रतिज्ञा गरेर बिहे गरेका थियौँ।”
“थाहा छैन कुन सिद्धान्त र आदर्शको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।”
“जबसम्म यस देशमा पहाडी र मधेशी समुदायबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्तैन भन्ने सिद्धान्त थियो।”
“त्यो सिद्धान्तप्रति म आज पनि प्रतिबद्ध छु, तर सिद्धान्तवादीको कस्तो हालत हुन्छ त्यो तपाईंले नै सुनाउनुभयो। त्यसैले आफैंले आफूलाई केही दिन घरमै कैद गरेर राख्नु सम्पूर्ण परिवारका लागि हितकर हुन्छ।”
“ए! म घरमा कैदी बन्नु, किनभने म मधेशी हुँ, काले हुँ, धोती हुँ। तिमी र तिम्रो पुत्र साँढेजस्तै घुम्छौ, किनभने तिमीहरू पहाडे हौ, सेता छौ, यस देशका सच्चा नागरिक हौ।”
श्रीमती खुट्टा बजार्दै घरबाट बाहिरिइन्। उसको मुखबाट निस्क्यो― तर यो हृतीक रोशन को हो? उताबाट कुनै जवाफ आएन। श्रीमती अर्को कोठामा सुतिरहेकी छन्। छोरो फर्केको छैन। उत्तेजनापूर्ण आकृतिहरू हिँडेर नजिकै आउँदै छन्। अपमानका शब्दहरूले अहिलेसम्म पीडा दिंदैछन्। बेचैनीको चरम सीमामा छट्पटाउँदै आधा रात बितिसक्यो। यसरी नै दिनका एउटा एउटा घटना भइरहे। किन कतैबाट कुनै जिज्ञासा पूरा हुँदैन। दिनभरि टिनटिनाउने टेलिफोन आज किन मौन छ?
मनमनै निधो गर्‍यो। बिहान झ्िसमिसेमै जनकपुर जान्छु। यही सुखद् निर्णयसँगै छटपटी केही कम भयो उज्यालो भयो। ऊ जनकपुरतिर हिँड्यो। शान्त, निश्चिन्त, योजनाविहीन भएर साँझ् नपर्दै जनकपुरनजिक आइपुग्यो। बस ढल्केबर पुगेपछि मुटु स्नेहपूर्ण भयो। चोक, पार्क, मान्छेहरू सबै हितैषी लागे। बस महेन्द्रनगर आयो। होटल, दोकान सबै चिनेझ्ैँ लाग्यो। बस गुडिरह्यो। रमदैयाको चौकी आइपुग्यो। सपही आयो। लछमनियाँ बजार आयो। मुजेलिया आयो। र, जनकपुरको पिडारी चोक आयो। आफ्नो ठाउँ र आफन्तबीच बसबाट उत्रिने बित्तिकै पूरा शरीर नवउमङ्गले भरियो। एक मनमा अँजुलीभरि धूलो उठाएर चन्दन जस्तै निधारमा लगाउने विचार पलायो। तर मानिसहरूले बहुलाहा भन्लान् भनेर धर्र्तीतिर झ्ुक्न सकेन।
ईश्वर, पूजापाठ आदिमा कहिल्यै त्यति विश्वास थिएन। तापनि आज सर्वप्रथम जानकी मन्दिर पुग्यो। टाढैबाट मन्दिर अनुपम सुन्दर लाग्यो। भव्य मन्दिरको सम्पूर्ण लम्बाइ, चौडाइ र उचाइलाई आँखामा डुबाएर भित्र प्रवेश गर्न आँट्तै थियो, फेरि कुनै नाराको आवाज कानमा पर्‍यो। मुटु ढुक्ढुक् गर्न थाल्यो, फर्किएर हेर्दा त साँच्चै एउटा झ्ुण्ड नारा लगाउँदै यतै आउँदैछः
हृतीक रोशन – जिन्दावाद!
टोपी नाकबुच्चे – तराई छोड!
उभियो। सोचमग्न भयो― यो हृतीक रोशन को हो? कतै मुर्दावाद र कतै जिन्दावाद! अचम्म लाग्दो कुरा छ। किताब लेख्तालेख्तै जिन्दगी सुकिसक्यो। मेरो सामान्य ज्ञान पनि कस्तो। जसका कारणले सम्पूर्ण देशमा डढेलो लागेको छ र त्यसको सिकार आफैँ भएँ। आखिर त्यो हस्ती को हो? झ्ुण्डको नजिक आएर एउटा युवकसँग सोध्यो― “बाबु! यो हृतीक रोशन को हो?”
युवक चिच्याएर उफ्रियो― “यही हो पहाडे, यही हो।”
सबै आक्रोशित भएर कुट्नका लागि कुदे। उसले ठूलो स्वरमा चिच्यायो― “म पहाडे होइन बाबु! म यसै ठाउँको हुँ। देवी चोकमा मेरो घर छ।”
युवक― “यो भर्खर हृतीक रोशनलाई किन जिन्दावाद भन्दैछौ भन्दैथियो।”
अर्को युवक― “हो अनि हेर त, यसका कपडा पहाडेको जस्तै छ नि!”
तेस्रो― “नाककान थेप्चो छ, अनि यो कति गोरो छ।”
चौथो― “जुन पहाडे मैथिली बोल्छ, त्यो सबैभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ।”
अनि त्यसपछि कसका कति मुक्का, लात्ती र जुत्ता उसका शरीरमा बजि्रए, ठेगान छैन। बेहोस भयो। एकैपटक अस्पतालमा होश खुल्यो। टाउकामा पट्टी, हातमा पट्टी, खुट्टामा पट्टी! शरीरमा जुन चोट छ, त्योभन्दा गहिरो चोट हृदयमा। ऊ माछाजस्तै छट्पटाउँदैछ। केहीबेर घोरिएपछि अलिकति मुस्कुरायो। समस्या अवगत भयो। सोच्न थाल्यो― यसैमा एउटा जीवन्त कथा हुनसक्छ। अहँ, यो कथावस्तु उपन्यासका लागि उपयुक्त हुन्छ। फेरि सोच्न थाल्यो― यो राष्ट्रिय समस्या हो। सबैलाई पढाउनु आवश्यक छ। तर यो हृतीक रोशन को हो? सोच्तै फेरि आँखा बन्द भए।
केही बेरपछि आँखा खुल्दा कुनै पत्रकार सोध्दैथियो “हजुर! यहाँ एक प्रसिद्ध लेखक हुनुहुन्छ, तर हिजो काठमाडौँमा यहाँलाई पहाडेहरूले चुटे, आज जनकपुरमा मधेशीहरूले। हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ?”
“हिजो काठमाडौंमा चुटाइ खाने प्राणी मानव थियो अनि कुट्ने बहुलट्ठी र आज जनकपुरमा जसलाई कुटियो ऊ मानव हो र कुट्नेहरू बहुलट्ठी!” यति भन्दै ऊ यसै विषयमा नव सिर्जनाको तानाबाना बनाउन फेरि आँखा चिम्म गर्छ।
मैथिलीबाट अनुवादः लक्ष्मीप्रसाद रिजाल
Categories LiteratureTags आँसु, कथा, जनकपुर, जानकी मन्दिर, डढेलो, डा. सुरेन्द्र लाभ, देश छोड, धोती, पहाडी, मधेशी, मुर्दावाद!, मैथिली, लक्ष्मीप्रसाद रिजाल, हृतीक रोशन
Previous Do visit Top Seven Fashion Lists for this fall and winter
Next THE WORLD POST 2000 A.D( PROPHECY,FORECASTING,PREMONITION AND MUCH MORE…)